चमेरो र बिरालोबाट कोरोना भाइरस सरेको पुष्टी, सावधानी अपनाउन अनुरोध ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/चमेरो र बिरालोबाट कोरोना भाइरस सरेको पुष्टी, सावधानी अपनाउन अनुरोध !
अहिलेको स ङ्क्रमणले फेरि चीनको वन्यजन्तु व्यापारतर्फ संसारको ध्यान खिचिदिएको छ। अहिले चीनले वन्यजन्तुको व्यापारमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको बेला संरक्षणकर्मीहरूले त्यसलाई स्थायी प्रतिबन्धमा बदल्न दबाव दिइरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार त्यो निकै चुनौतीपूर्छ हुनेछ।
सा र्स र मे र्सजस्ता भा इरस पनि चमेराबाट सिभेट बिरालो र उँट हुँदै मानिसमा सरेको बताइन्छ।
लन्डनस्थित वातावरण अनुसन्धान संस्थाकी डेबी ब्याङ्क्स भन्छिन्, “हामी यसलाई परम्परागत चिनियाँ औ षधिका लागि वन्यजन्तु पालन, उत्पादन र प्रयोग अन्त्य गर्ने अवसरको रूपमा लिन सक्छौँ।”
तर विज्ञहरू वन्यजन्तु संरक्षणको प्रयास चीनमा मात्र सीमित नगरेर विश्वव्यापी बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
चार रातमा काठमाण्डाैका सडकबाट दुई सय पन्ध्र बेसहाराको उद्धार